WAX KA BARO DALKA BANGLADESH Qallinkii Mohamed Fadan
Sunday, 18 June 2017 19:44
Dalka Bangladesh waxa uu dhacaa koonfurta qaarada Asia, magaca dawliga ah ee loo yaqaanaa waa Jamhuuriyadda Shacabka Bangladesh ( Peoples Republic of Bangladesh).
Sannadii 1971 intii ka horaysay dalka Bangladesh waxaa loo yaqaanay Baribakistaan.
Caasimada dalka Bangladesh waxa la yidhaa Dhaka, waxaanay dhacdaa bartamaha dalka.
Guud ahaan ahaan tirada dadka ee dalka gudihiisa ku nool waxa lagu qiyaasaa 170,000 000 ( Boqol iyo Todobaatan Milyan) waana tirikoobtii la sameeyay 2016.
Caasimada dalka oo aan ku suganahay waxa ku nool 16,000 000 ( Lix iyo Toban Milyan).
Bangladesh waxa ay xuduud la leedahay, dalalka Hindiya oo ka xiga galbeedka iyo woqooyigaba.
Bangladesh waxa dhanka bari ka xiga wadanka Burma, Koonfuta-na waxaa ka xigta Badweynta Hindiya.
Bangladhesh waxa ay ka go'day dalka Pakistaan sanadku markuu ahaa 1971, ka dib dagaal dheer iyo halgan ay usoo mareen xoriyadooda.
Bangladhesh waa wadan dhaqaale ahaan aad u liita, iyada oo taasi jirto hadana waa dad kaaftoomay oo ka maarmay wixii dunida uga iman lahaa, 85% baahidooda iyaga ayaa dabara oo lasoo baxa halka 15% ka kale dunida looga soo dhoofiyo.
Dhanka kale dalka Bangladesh dadkiisu waxay safka hore kaga jiraan dadyowga ugu badan ee ku daadsan dunida dacaladeeda.
Dhulka uu ku fadhiyo dalka Bangladesh waa 55,598.71 oo (mayl laba jibaaran) una dhiganta 144,000.00 oo (kiilimirir laba jibaaran). Bangladesh waxa ay waxyar uun ka wayntahay dalka Somaliland.
Dadka kunool Bangladesh waxa lagu qiyaasaa 170 milyan oo ruux, waana tirakbookii laqaaday sanadkii 2016.
Dadku waa dad is jecel oo aad isku tixgaliya, waana dad nabad jecel oo colaad soo arkay, kana dhaxlay is jacayl iyo ixtiraam.
Qabaa'il male balse bulshadu waxay isugu xidhan yihiin deegaano oo intii isku deegaan ahiba dadka way iska xigtaa.
Luuqadaha lagaga hadlo dalka waxa ugu horeysa luuqada maxaliga ah ee Bangaaliga (Bangoli Language), waxana soo raacda luuqada Urduuga (Urdu Language) oo ah luuqad lagaga hadlo dalka Pakistan oo ay Bangladesh ka go'day iyo India badhkeed.
Diimaha laga aaminsan yahay gudaha dalka Bangladesh waxa ugu badan dadka haysta diinta Islaamka oo gaadhaya 84%, mad-habka diinta ee ay haystaana waa Imaamu Xanafi.
Sidoo kale diinta Hinduugu dadka haystaa waxay gaadhaan boqolkiiba 12%.
4% ta kalena waxa ay hasytaan diimo kale.
Bangladesh waa dal nabdoon, waxana ka jirta nabad galyo taam ah, kamana jiraan Argagixiso, Urur diimeedyo Gangs iyo wax kasta oo nabad-galyada wiiqa.
Dadka reer Bangladesh na waa dad nabad galyada jecel, indhahaaguna qaban maayaan Laba qof oo la kala jiidayo.
Tayada waxbarasho ee dalka Bangladesh aad bay u saraysaa, waxana ku yaala in ka badan 129 jaamacadood oo isugu jira kuwo dawli ah iyo kuwo gaar loo leeyahay.
Waxa jira arday badan oo Soomaaliyeed oo wax ka barta Bangladesh.
Waxbarashada dalka Bangladesh ayaa ah mid aad u jaban kharash ahaan marka loo eego qaarada Asia.
Rajada nolosha ee dadka ku dhaqan dalka Bangladesh ayaa waxa ay celcilis ahaan gaadhaan 70-sano oo ragg iyo dumarba ah.
Bangladesh mararka qaar waxad arkasaa 90 jir xoogsanaya.
Nidaamka dawladnimo ee dalka ka shaqeeyaa waa kan Baarlamaaniga ah (Parliamentary System). waxanu u qaybsamaa:
Madaxweyne, Ra'iisal wasaare, Golaha wasiirada, Golaha sharci dajinta iyo sidoo kale Maxakamado.
Dalka waxa ka jira hanaanka xisbiyada badan oo waxa ka jira 18 xisbi qaran balse waxa ugu caansan oo hormuud ka ah Labada xisbi qaran oo ay kuwa kalena alliance la leeyihiin, waxanay kala yihiin:
BANGLADESH NATIONAL PARTY oo loosoo gaabiyo (PNP) oo ay madax ka tahay Marwo Khaleda Zia oo Laba jeer oo hore soo ahayd Ra'iisul wasaaraha dalka, iyo xisbiga kale ee BANGLADESH AWAMI LEAGUE oo ay madax ka tahay Marwo Sheekh Xasiina oo ah Ra'iisal wasaaraha haatan ee Bangladesh.
Dhaqaalaha Bangladesh aad buu u hooseeyaa, waxana lagu tiriyaa inu hogaanka u hayo dalalka ugu dhaqaalaha liita qaarada Asia.
Dhaqaalaha dalku wuxu ku tiirsanyahay warshadaha iyo wax soosaarka kale ee dalka sida khayraadka dabiiciga ah.
Lacagta laga isticmaalo dalka waxa la yidhaa Taka (Tk), waana lacag ku kooban oo laga isticmaalo Bangladesh oo kali ah.
Dalka Jamhuuriyada Bangladesh waxa uu hodan ku yahay warshadaha waxana kamid ah waxayaabaha ay soo saaraan warshadadaasi: Dharka, Waraaqaaha, Sonkorta, Bariiska, Cudbiga, Sibidhka, Iyo qaybo kamid ah Technolig-yada.
Cimilada dalku waa mid kulayl u badan, mararka uu ugu badan yahayna heerkulku wuxu gaadhaa 39°c --- 40°c.
Xilliyada Bangladesh sida caadiga ah waa Afar xilli ( 4 season) oo kala ah: Gu, Dayr, Xaggaa iyo Jiilaal, balse iyagu way sii kala qaadaan waxanay ka dhigaan Lix xilli oo kala ah:
Grisma (Xaggaa), Barsa (Xilli roobaad), Sarat (Dayr), Hemanta (Dabayaaqada dayrta), Shhit (Jiillaal) and Basanta (Gu).
Bangladesh waxa ay hodan ku tahay wax soosaarka, waxana si balaadhan looga beeraa midho badan oo uu ugu horeeyo geedka caanka ka ah qaarada Asia ee Bariiska, waxa kale oo ka baxa dalka Bangladesh Shaaha, Qamadiga, Sonkor khaanka, Tubaakada, Khudaarta, Saliida iyo midho kala gadisan oo aad u tiro badan.
Wax laga dhaqdaa dalka Bangladesh xoolo kala duwan waxana jira goobo lagu xaananeeyo, waxana ugu badan Adhiga iyo Lo'da, waxa kale oo aad loo dhaqdaa Diggaaga..
Khayraadka dabiiciga ah ee Bangladesh ay hodanka ku tahay waxa kamid ah: Gaaska dabiiciga ah, Geedka timber-ka iyo Dhuxul dhagax.
Xagga dhaqanka dalku wuxu inta badan la wadaagaa dalka India maadaamaa dadku asalkoodii hore ka farcamay Hindi.
Bangladesh ma aha dal loo dalxiis yimaado balse walow ay ku yaalaan goobo badan oo dalxiiska ku wacan oo ay ka mid yihiin xeebta caanka ah ee Cox's Bazar oo ah xeebta dunida ugu dheer isla markaana ah goob dalxiiska ku wanaagsan.
Waxa kale oo iyaguna goobo badan oo caan ku ah dalxiiska sida buuralayda cagaaran ee Sylhet oo ah deegaan uu baxo dalaga Bangladesh kala badh.
Sylhet waxa kale oo ay caan ku tahay waxa ka baxa Shaah Toddoba midab leh, waana mucjiso Rabbaani ah.
Siyaasada wadanka oo ah mid xidhxidhan aawadeed iima suurto galin inaan warbixin intaa ka badan ka diyaariyo, intan koobanina waa in aan is leeyahay wax uunbay ka anfacaysaa dadka ubaahan barashada Juqurufaayida dunida iyo cidkasta oo danaynasa inay wax ka ogaato habka dhaqan dhaqaale ee ay unoolyihiin qoomiyadaha dunidu.
More in this category: « ISBARBAR DHIGA CIIDAMADA RRU IYO NISA Qoralkaa: Cabdiraxman Yacqub Xasan Xogayaha war-fafinta UCID Yussuf K. Abdillahi weli muu baran in Faizal C. Waraabe xeryaha milertiga iska galo by Abdi Mustafe »